Janaswasthya Editor, Author at Janaswasthya Khabar
Author: Janaswasthya Editor
जनस्वाथ्य खबर - July 8, 2021	0
प्रकाश परियार, काठमाडौँ - करिब डेढ वर्ष देखि सारा विश्व कोभिड-१९ महामारीको चपेटामा पिल्सिएको छ । एक पछि अर्को नयाँ कोरोना भाइरसको भेरियन्ट देखिने क्रम जारी छ । विश्वका महाशक्तिशाली राष्ट्रहरु जहाँ स्वास्थ्य सेवाको प्रचुर विकास सँगै वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानमा...
जनस्वाथ्य खबर - July 7, 2021	0
सबै उमेर समुहका मानिसमा आँखाको दृष्टि धमिलो देखिने वा तिरमिर देखिने समस्या हुनसक्छ । यसलाई कतिपयले सामान्य सम्झेर हेलचेक्र्याईं गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । यस्तो समस्या उमेर बढेसँगै बढी देखा पर्दछ । तर पछिल्लो समय कम उमेर वा बच्चा बेलादेखि...
अहिले वर्षायाम चलिरहेको छ । वर्षायाममा खाना र पानीको प्रदुषणका कारण विभिन्न रोगब्याधीहरु फैलिने गर्छन् । त्यतिमात्र होइन वर्षाको पानीमा भिज्दा समेत चिसो, रुघाखोकी देखि लिएर फंगल संक्रमण देखि लिएर विभिन्न छालासम्बन्धि रोग लाग्ने जोखिम हुन्छ । वर्षायाममै मलेसिया, डेंगु...
शारीरिक विकासका क्रममा कहिलेकाहीँ बच्चाको हातगोडा दुख्ने समस्या आउन सक्छ । यस्तो समस्यालाई मेडिकलमा ‘ग्रोइङ पेन’ (बढ्दो उमेरको समस्या) भनिन्छ । बच्चामा किन यस खालको समस्या देखिन्छ त ? बच्चामा आवश्यक क्याल्सियमको कमीले यस्तो समस्या निम्तिने वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ प्रा.डा. गणेश...
अतुल मिश्र, काठमाडौँ — कोभिड–१९ को तेस्रो लहर छिट्टै आउन सक्ने भन्दै अहिले नै तयारी थाल्न विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । खोप नलगाएका व्यक्ति र बालबालिका तेस्रो लहरबाट बढी प्रभावित हुने उनीहरूको विश्लेषण छ । कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक एवं वरिष्ठ बालरोग...
अतुल मिश्र काठमाडौँ — कोभिड–१९ विरुद्ध एक मात्रा लगाए पुग्ने ‘जेन्सेन’ खोप ल्याइने भएको छ । अमेरिकी फर्मास्युटिकल कम्पनी जोन्सन एन्ड जोन्सनद्वारा उत्पादित कोभिडविरुद्धको खोप ‘जेन्सेन’ कोभाक्स सुविधाअन्तर्गत अनुदानमा नेपालले पाउन लागेको हो । जोन्सनको ‘जेन्सेन एडी२६.सिओभी.२’ एक मात्रा लगाए पुग्ने खोप...